DHAGEYSO : Sheekh Qaasim Al-Riimi oo ka hadlay Howl-galkii Mareykanku ay todobaadkii hore ka fuliyeen dalka Yemen. – Shabakadda Wararka Amiirnuur
DHAGEYSO : Sheekh Qaasim Al-Riimi oo ka hadlay Howl-galkii Mareykanku ay todobaadkii hore ka fuliyeen dalka Yemen.
February 4, 2017 8:13 pm by admin Views:
Hogaamiyaha Mujaahidiinta Al-Qaacidda ee Dhulka Jaziiradda Carabta Sheekh Abuu Hureyra Qaasim Al-Riimi ayaa farriin cusub oo uu soo diray waxa uu kaga hadlay howl-galkii fashilmay, islamarkaana khasaaraha badan uu Mareykanku kasoo gaaray ee todobaadkii hore ka dhacay Gobolka Al-Beydaa ee dalka Yemen.
Sheekhu waxa uu tacsi u diray dadkii Muslimiinta ahaa ee ku shahiiday duqeyntaasi Arxadan darrada ah, gaar ahaan Qabiilka Qeyfa, wuxuuna Sheekhu tilmaamay in weerarkaasi ay ku shahiideen 14 ragh iyo 11 isugu jira dumar iyo caruur.
Sheekh Qaasim Al-Riimi waxa uu sidoo kale sheegay in weerarkaas ay soo qaadeen Ciidamada Mareykanka in khasaare xooggan uu kasoo gaaray Ciidamadaasi, Mujaahidiintu soo rideen diyaarad nooca Helicoterka ah xilligii uu dagaalku socday.